FRAM ihany ianao fa tsy ho mpiasam-panjakana
2014-09-03 @ 11:12 in Andavanandro
Akaiky ny fidiran'ny mpianatra. Misy ireo manomboka ny taom-pianarana amin'ity volana septambra ity, misy kosa amin'ny volana ambony vao manomboka. Rentsika ombieny ombieny ny fitarainana sy ny fitokonan'ny mpampianatra FRAM noho ny fahavitsian'ireo horaisin'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena. Olana politika saro-bahana ny momba an'io satria ilaina sy kitro ifaharan'ny firenena tokoa izay fampianarana izany ary laharam-pahamehana mialoha ny handraisana manamboninahitra miaramila, raha amin'ny fijeriko manokana.
Na dia maro dia maro aza ny isan'ny mpampianatra mpiasam-panjakana dia mbola tsy ampy hatrany satria te-hivangongo eto an-drenivohitra daholo izy ireo fa tsy te-hisahirana ho any ankodahoda any. Misy ihany ireo vonona ny hampianatra any amin'ny toerana saro-dalana saingy lasa toy ny mitady loza raha karama tsy misy dikany tsy mahavelona herinandro akory no omena azy ireo. Misy anefa ireo mpiasam-panjakana omena alalana hitam-piadiana tsy esorina aminy na dia ny hetra tokony aloany amin'ny maha-mpiasam-panjakana azy aza satria izay manam-piadiana no tompon'ny fahefana. Atao ahoana moa fa rehefa tsy te-hiongana ny mpitondra dia arahina ny sitrapon'izy ireny. Saingy tsy any loatra moa ny zavatra tena tiana horesahina fa resaka fampiarana. Ny olana manko rehefa mpiasam-panjakana, na amin'ny sehatra inona io na sehatra inona dia ny roa na telo na farafahabe dia dimy taona ihany no mihafy any amin'ny dezaka fa avy eo amin'izay mitady ny lalana sy ny fomba rehetra hiakarana an-drenivohitra. Tarazo ratsy napetraky ny fahalalana olona izany fa tsy nifototra tamin'ny tena fahaizany tokoa, ary vokatry ny toe-tsaina mihevitra fa aty an-drenivohitra ihany no tena fiainana.
Raha dinihana tsotsotra ny niandohan'ny olana eo amin'ny fampianarana sy ny nipoiran'ny antsoina hoe mpampianatra FRAM, izay fanalavana ny Fikambanan'ny Ray Aman-drenin'ny Mpianatra, dia avy amin'ny fanafoanana ny Fanompoam-Pirenena Ivelan'ny Tafika, Service National Hors Forces Armées (Populaires) na SN tamin'ny taona 1991. Ireo SN ireo, izay tanora vao afaka Baccalauréat, no nahavita ny ampahany betsaka indrindra tamin'ny fampianarana tany ambanivohitra nandritra ny Repoblika Faharoa na dia tsy vitsy aza ireo nikilavaka fa kely ny vola noraisin'ireo tanora ireo. Voasaron'ny hamaroan'ny SN ny fahavitsian'ny mpampianatra noho ny ezaka nananganana sekoly vaovao SFF isam-pokontany, na SAFF isam-piraisampokontany, na Lisea (SAFM) isam-pivondronana. Tsy teo amin'ny fampianarana ihany anefa no ahitana ny SN fa rehefa minisitera rehetra nisy teto Madagasikara dia saika nahita azy ireny avokoa. Noho izany, raha nofoanana ny SN dia tsy maintsy maro sy lehibe ny fahabangana naterak'izany fanafoanana izany ary tany amin'ny fampianarana no tena niantraika lalina ny fahabangana. Fiheverako manokana io fa anjaran'ny tsirairay ny mitsipaka na manamarina.
Dia lasa amin'izay ny kajikajy tsy dia manao ahoana avy aty amiko, 22 taona eo ho eo izany no nipoiran'ny mpampianatra FRAM rehefa nofoanana ny SN. Nantsoina hoe mpampianatra FRAM satria ny FRAM no miantoka ny karaman'izy ireo atao vola na vokatry ny tany misy eo amin'ilay toerana. Mety ho manana ny mari-pahaizana ho amin'ny fampianarana ilay olona na tsia. Raha 20 tamin'izany fotoana izany ilay mpampianatra dia 42 taona izany izy amin'izao fotoana izao. Raha 23 taona tamin'izany fotoana izany ilay nanolo-tena ho mpampianatra dia 45 taona izy amin'izao fotoana izao, nefa tsy eken'ny minisitra ho ampidirina ho mpiasam-panjakana intsony satria hoe efa be taona loatra. Izay mpampianatra FRAM nitozo tamin'io fampianarana io hatramin'ny nipoirany voalohany izany dia vita hatreo ny aminy raha tamin'ny taona 1992 tokoa no nanomboka nampianatra fa tsy "tafiditra" ho mpiasam-panjakana intsony. Raha ny tombatombana avy aty amiko anefa dia any amin'ny 25-26 taona any ho any ilay olona na mihoatra aza no miditra ho mpampianatra FRAM satria tsy mahita asa hafa (natao hitady asa ilay Malagasy!) hatao. Tsy hahagaga ahy loatra noho izany raha misy ireo mitokona satria simba tanteraka ny fiainany niaritra tao. Dia manontany hoe mba mijery izay lafin-javatra izay ve ny ao amin'ny fitondrana sa sao sanatria ny hampiditra ny namana sy ny akama ary izay manaiky hiditra ao amin'ny antoko ihany no ampidirina ho mpiasam-panjakana. Eritreritra tsy tana tsy voatery ho marina fa voasoratra tsy tana ihany koa!
PS: zavatra hafa momba ny kojakojam-pianarana no saiky hosoratana dia lasa any indray ilay aingam-panahy.